नसुनिएका आवाज - Page 18 of 19 - KHASOKHAS
शहरका मान्ठा ५० हजार तोला सुन पाउँदा खुशी छन, उता दुर्गमका मान्ठा ५० रुपैया पोका नुन पाउदा खुशी छन मेरो देशमा । सुन र नुनको मुल्य बुझिनसक्नु छ । बाजुरा हुम्लाको स्थलगत रिपोर्ट : मीना शर्मा सरकारले उत्तरी बाजुराका रुगिन, बिच्छ्या तथा हुम्लाका मैला, मदेनालगायतका गाविसमा चामल र औषधि त के नूनसमेत पुर्‍याउन सकेको छैन। …
उल्टो सिट हट्यो, उभिनुपर्यो : चारको ठाउँमा आठ
काठमाडौं – महिला हिंसा भएको र यात्रु बिरामी भएको भन्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यका भित्र गुड्ने माइक्रो बसको उल्टो सिट हटाएपनि यात्रु उक्त समस्याबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् । पहिला चार जना अटाउने उल्टो सिटमा अहिले व्यवसायीले आठ यात्रुलाई उभ्याउने गरेका छन् । महाशाखाले डेढ महिनाअघि उपत्यकामा चल्ने सबै (दुई सय ६० वटा) …
लालपुर्जा सिरानीमा, जग्गा अर्कैको नाममा !
काठमाडौँ – लालपुर्जा तपाइँको हातमा होाल । तर लापुर्जाको नक्कल लिई कतै दुई नम्बरी धन्दा गर्नेले तपाइँको जग्गा भित्रभित्रै बेचिरहेका त छैनन् । लालपुर्जा हातैमा छ भनेर ढुक्क नहुनुहोस्, किनभने जग्गा कतै मालपोत कार्यालयमा भित्रभित्रै कागज लिाएर तेस्रो पक्षसँग बेचिदिन पनि सक्छन् । बितेको एक सातामा चितवनमा २ वटा यस्ता घटना भएका छन् । मालपोत …
हामीले लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौं । सबै राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध पनि ग¥यौं । तर सा“च्चै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको सबै नेपालीले अनुभूत गर्न सकेका छौं त ? पक्कै पनि हामीले सही अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै बा“की छन् । यसपटक विदेशमा …
‘तलब माग्दा तातो पन्यूँले कुट्थे’
६ पुस, काठमाडौं – ‘म विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगारीको बारेमा जानकारी दिने कोही थिएन ।’ विदेशबाट फर्किएकी एक महिलाले भनिन्, ‘विदेश जानका लागि पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको बारेमा पहिले नै जानकारी पाएको भए मैले त्यस्तो धेरै दुःख पाउँदिन थिए होला !’ कुवेत, साउदी अरब र ओमन पुगेर फर्किएकी खोटाङको निर्मलीडाँडा–३ की हीरा राईले गन्धर्व गीतियात्राका …
बाजुरा, हुम्ला र मुगुका गाउँमा अहिले पनि सुत्केरीलाई फोहोर गोठमा, अमानवीय कष्टमा राखिन्छ । ‘नियमित गर्भ परीक्षण’, ‘सुरक्षित मातृत्व’ र ‘पोषणयुक्त खाना’ जस्ता सरकारी प्रचारवाजी भन्दा धेरै पर हदै दयनीय छ सुत्केरीको अवस्था । खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि बाजुरा, हुम्ला र मुगुबाट फर्केर मीना शर्मा साथमा प्रकाश सिंह नन्दसरा सार्की नन्दसरा सार्की (२३) बाजुरा, …
पौष्टिक आहारको कमीले एचआईभी सङ्क्रमित महिला झन्झन् कमजोर हुँदै गएका छन् । गरिबीका कारण सङ्क्रमितले प्रयोग गर्ने औषधि एआरभी खानसमेत उनीहरूलाई मुस्किल पर्न थालेको छ । प्रकाश सिंह बाजुरा । बाह्रबिस– ७ सिगाडा बस्ने लालीदेवी साउदले पेटभरि खान नपाएको महिनौँ भयो । उनले दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर बिहान–बेलुकीको छाक टार्दै आएकी छिन् । साउद भन्छिन्, ‘एचआईभी/एड्सले …
‘दुई छोरा नभए मर्ने बेलामा कसले पाल्छ भन्ने सोचाइ छ कालिकोटका गाउँमा । यो सोचाइले महिला बच्चा जन्माउने मेसिन भएका छन् । छोराकै आसमा धेरै घरमा ५–६ जना छोरीहरू छन् ।’ दुर्गालाल केसी कालिकोट । स्वास्थ्यचौकीमा एक–दुई दिनको फरकमा बच्चा जन्मिरहन्छन् । कुनै दिन बच्चा जन्मेको धेरैले थाहा पाउँछन् भने कुनै दिन धेरैलाई थाहा हुन्न …
राधिका कँडेल/ पोखराकी प्रतिभा बोगटीले श्रीमानसँन भनिन्, ‘मलाई प्याराग्लाइडिङ पाइलट बन्ने इच्छा छ ।’ उनले तालिममा जान मन लागेको छ भनेर जिद्दी गरिन् । जोखिमपूर्ण काम गर्ने तालिममा जाने भनेको सुरुमा श्रीमानले पत्याएनन्, हुन्न भनेर पन्छाए । उनका श्रीमानले मात्र होइन त्यसबेला तालिम दिने र प्याराग्लाइडिङ कम्पनी सञ्चालन गर्नेहरूसमेत महिलालाई पत्याउँदैनथे । किनकि महिला प्याराग्लाइडिङ …
वसन्तप्रताप सिंह बझाङ । छाउपडी बार्नुहुँदैन भनेर सिकाउन हिँडेकी मेलबिसौना स्वास्थ्यचौकीकी स्वास्थ्यकर्मी (अनमी) अनिताकुमारी सिंह आफैँ महिनावारी हुँदा गाउँभन्दा दुई किलोमिटर टाढा जङ्गलमा रहेको छाउपडी गोठमा बस्नुप-यो । घटना मेलबिसौना गाविस– २ लोकण्ड गाउँमा भएको हो । गाविसका अन्य वडाबाट एक दिनको पैदल दूरीमा पुगिने यो गाउँ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्दछ । गाउँमा महिनावारी हुँदा …